Samsung's Galaxy Fit 2 dia efa misy any Espana izao amin'ny vidiny 49 € | Androidsis
Raha miresaka momba ny famaritana haba amin'ny tsena ankehitriny isika dia tsy maintsy miresaka momba ny Xiaomi Mi Band, maodely nahafahan'ny olona an-tapitrisany midira amin'ny tontolon'ny mpanisa noho ny vidiny ambany. Rehefa nandeha ny taona dia nanisy fiasa vaovao ho an'ny Mi Band i Xiaomi, izay namela azy hanohy ho referansa eo amin'ny tsena.
Ireo mpampiasa dia tsy manana bracelet miisa, manana Mi Band izy ireo. Samsung, toa an'i Fitibt, dia nanandrana nifanaraka tamin'ny tsena noforonin'i Xiaomi tamin'ny alàlan'ny fandefasana fehin-tànana mora vidy kokoa, ny Galaxy Fit 2 no filokana farany an'ny Samsung, fehin-tànana izay vao nidina tany Espana tamin'ny vidiny 49 euro.
Ny Samsung Galaxy Fit 2 dia taranaka vaovao amin'ny brasele biometrika Samsung izay azontsika atao mitarika fomba fiaina mahasalama kokoa, noho ny fanatanjahan-tena sy ny fanaraha-maso ny torimaso ary koa ny fampahatsiahivana hanatsarana ny fahadiovan'ny tena manokana toy ny fanasana tanana matetika.
Ny Galaxy Fit 2 dia maharitra batterie hatramin'ny 21 andro, fotoana iray ahena ho 15 andro raha ampiasaintsika tsy tapaka hanaraha-maso ny asantsika ara-panatanjahantena. Ny efijery amina endrika AMOLED dia manana pips 1,1 sy vahaolana 126 × 294 teboka, mamantatra ho azy ny karazana fanazaran-tena ataontsika ary manisa ny kaloria may, ny tahan'ny fo, ny dia lavitra….
Ny hatevin'ity maodely vaovao ity dia 11.11mm, milanja 21 grama, azontsika atao ampanjifaina mora foana amin'ny sehatra 70 mahery, dia azo alentika hatramin'ny 50 metatra izy ary manana fanamarinana 5ATM, mba hahafahantsika mampiasa azy amin'ny fotoana sy toerana rehetra nefa tsy miahiahy momba ny fahamendrehan'ilay fehin-tànana.
Ao anatiny no ahitantsika ny rafitra fiasan'ny FreeRTOS, RAM 2 MB, fitehirizana 32 MB, Bluetooth 5.1. Azo alaina amin'ny loko mainty sy mena (Black and Scarlet) ary misy amin'ny 49 euro amin'ny tranokala Samsung na dia misy aza afaka mahita izany amin'ny Amazon isika amin'ny kely kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung's Galaxy Fit 2 dia efa misy any Espana izao amin'ny vidiny 49 euro
Talohan'ny nanombohany tany Amerika Latina, Disney + dia nihoatra ny 70 tapitrisa ny mpanjifa